Isifundo samaThuluzi AseMsebenzini
Kungani wena ukhathela kusuka ukuphatha abantu usuku lonke nokuthi yini ongayenza ngalokho.
Ukukhiqiza okuphela amandla, ukudilizwa emsebenzini okukhulu, ubudlelwane obungemnandi phakathi kwabaphathi nabasebenzi, ukungakwazi ukusebenza kahle kanye nokuhweba okungathembeki konke kuhlupha indawo yokusebenza. Akumangalisi ukuthi isenzo somsebenzi siwumthombo wengcindezi nokukhathazeka kwezigidigidi.
Ungakhuphula kanjani ukusebenza kahle komkhiqizo kanye nokukhiqiza, futhi ungabhekana kanjani nokucasuka nokudideka emsebenzini nokuthi ungakunqoba kanjani ukukhathala konke kuyizinto ezithinta isisebenzi nomphathi. Isinqumo sabo besingalethi kuphela ukuphepha okukhulu kepha nokwaneliseka okukhulu.
Lesi sifundo siqukethe uhlu olubanzi lwezimiso namasu ka-L. Ron Hubbard athuthukiselwe ukusetshenziswa endaweni yokusebenza. Umsebenzi awusikho kuphela ukuthi ube nomvuzo futhio wanelisayo, kepha njengomsebenzi omkhulu ezimpilweni zethu eziningi, kufanele kube. Ukusetshenziswa kwalolu lwazi kuzokusiza ukuthi ukwenze nje lokho.
Amahora amahlanu kuya kwayisithupha. Kodwa ke, ungasenza le sifundo ngejubane lakho. Ngamanye amagama, akwanele. Isifundo lesi siyinsizakalo yethu kuwe, mahhala.
Incwajana AmaThuluzi AseMsebenzini
Lapho sekuqediwe Isifundo samaThuluzi AseMsebenzini, uzothola isitifiketi nge-email.
“Lesi sifundo besingizuzise kakhulu, futhi sithuthukise ukusebenza kwami ngempumelelo kanye nokukhiqiza ehhovisi. Ukusetshenziswa kwamathuluzi ahlukahlukene kuthuthukise ikakhulukazi ukuxhumana kwami nozakwethu. Futhi kudale umuzwa wokusondelana namathuluzi asendaweni yethu yokusebenza, kanye nokuthi ungakusebenzisa kanjani ukulawula okuhle nokusingatha ukukhathala (hhayi okwami kuphela kodwa nabangani bami, futhi).
“Ngiyajabula ukuthi mina nozakwethu sesiyimithombo yokunqoba nezimpumelelo kwihhovisi lethu ngenxa yalokho engikufundile!” – MM
“Isifundo samaThuluzi AseMsebenzini saba isipiliyoni kakhulu. Ngokuqinisekile bekuwufundwa okunamandla. Kungisizile ngabona ukuthi ngikwazi kalula ukunqoba ukudideka, futhi ngizijwayeze kangcono futhi ngisebenzise noma yiluphi uhlobo lomshini noma into engisebenza nayo ngokusebenzisa inqubo ye-Reach and Withdraw, futhi ngisize nabanye benze okufanayo. Futhi, kungifundise ngokukhathala emsebenzini nokuthi ngingakunqoba kanjani. Isifundo sichaze izixazululo ezisebenzayo nezilula zezinkinga zansuku zonke ezingasetshenziswa yiwo wonke umuntu. Ngikwazisa kakhulu ukuba lula, futhi nginomuzwa wokuthi isifundo sinikela ngokulula, kepha ngendlela enamandla nephumelelayo.
“Ingxenye engangiyithanda kakhulu kulesi sifundo kwakuyingxenye ethi‘ Thatha Ukuhamba.” Ukuhamba nje ubheke okuzungezile kuwusizo olukhulu uma unengcindezi, uzizwa ukhathele, njll. Futhi, umqondo wokuhamba ubheke bonke abantu abahlukahlukene ongahlangana nabo ohambweni lwakho nawo wawumuhle kakhulu. Kuyindlela enhle yokuzwa ukukhululeka uma ubusebenza nabantu abanzima emini.
"Ngizizwa sengathi ngingajwayela futhi ngisebenzise kangcono noma yini engisebenza ngayo manje, ngokumane ngithintane nayo futhi ngithintane nayo kakhulu, kungaba ithuluzi, umuntu, noma indawo engizungezile.” – E.D.
“Ngifunde lukhulu kulesi sifundo, ekuqaleni ngomgomo we-Stable Datum. Ngikusebenzise kaningi lokhu selokhu ngafunda ngakho, futhi kuyangisiza ukuhlala ngilawula izimo emsebenzini nasekhaya. Ngempela ngithole umsebenzi omusha ngenkathi ngifunda lesi sifundo, ngakho ke singena kahle.
“Ngisebenzise inqubo ye-Reach and Withdraw kimi lapho ngiqala umsebenzi, futhi yangisiza ngakwazi ukuxhumana nendawo engangikuyo emsebenzini omusha. Futhi noma nini lapho isimo sezulu sivuma ngithatha uhambo ngezikhathi zami zekhefu.
“Ngithola izindlela ezintsha zokwakha kabusha umsebenzi wami nsuku zonke, ngiwenze ube mnandi futhi uzuzise. Futhi konke kungenxa yamathuluzi engiwafundile futhi ngawasebenzisa ekutadisheni lesi sifundo.”